गैंडा आउँछ बाली मास्छ, तिमीले बार लगाइदिन्छौ ??
बाघ आउँछ बाख्रा लान्छ, आई कहिल्यै धपाइदिन्छौ ??
जोगाऊ, जोगाऊ मात्र भन्छौ, हाम्रो पिर कसले बुझ्छ ??
हात्ती आउँछ घर भत्काउँछ, तिमी आई बनाइदिन्छौ ??
Next अझै गरौँ ; अन्यत्र पनि गरौँ